Huawei P30 na P30 Pro: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị | Gam akporosis
Huawei P30 na P30 Pro: A na-emegharị ọhụụ dị elu
Dị ka enen izu ole na ole gara aga, a gosipụtara ọkwa nke Huawei P30 na ọkwa taa March 26 na Paris. N'ime izu ndị a, e nweela ọtụtụ asịrị banyere ọhụụ ọhụrụ a dị elu nke akara ndị China. Akụkụ nke nkọwa ya na-eri eri, nke kwere ka nwere echiche doro anya karịa ka anyị tụrụ anya ya. N'ikpeazụ, e gosilarị ha.
Ebe ọ bụ na Huawei P30 na P30 Pro bụ ndị ọrụ. Ọdịdị ọhụrụ dị elu nke akara ika China, nke etinyegoro na usoro ọhụụ, yana nlebara anya pụrụ iche na igwefoto, ebe akara dị ka akara aka na ngalaba a. Abụọ dị elu nke elu ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ na-achọ ịkụ tebụl.
Anyị ga-agwa gị okwu n'okpuru na nke ọ bụla n'ime ekwentị abụọ a n'otu n'otu. Anyị na-ebu ụzọ gosipụta nkọwa nke ọ bụla n’ime ha, ka inwee ike inweta echiche. Mgbe ahụ, anyị ga-agwa gị ihe banyere ha, na ọtụtụ mgbanwe ndị ụlọ ọrụ webatara na nso a nke Huawei P30s. Gịnị ka anyị ga-atụ anya n’aka ha?
1 Nkọwapụta Huawei P30
1.1 Huawei P30: Ọganihu dị elu
2 Nkọwapụta Huawei P30 Pro
2.1 Huawei P30 Pro: Foto dị ka ihe na-elekwasị anya
2.2 Nhazi, RAM, nchekwa na batrị
Nkọwapụta Huawei P30
Anyị na-amalite mbụ na ihe nlereanya nke na-enye aha ya na njedebe a nke akara ngosi China. A mma ama, nke anyị nwere ike ịhụ mgbanwe imewe na ẹkenam na ya. Dị ka na-eji nke a obere notch na udi nke a dobe mmiri, nke nwere ọgụgụ isi karịa, nke anaghị achịkwa ihuenyo. Na mgbakwunye, Huawei P30 a gbara mbọ belata mbadamba ihuenyo ruo na nke kachasị. Nke na-enye gị ohere iji ihu ọma zuru oke.
Na azụ anyị nwere igwefoto atọ na ngwaọrụ. Tụkwasị na nke ahụ, abanyela ihe mmetụta mkpịsị aka n'ime ihuenyo nke ngwaọrụ ahụ. Ndị a bụ Huawei P30 nkọwa zuru ezu:
Huawei P30 ọrụaka nkọwa
Ihuenyo 6.1-inch OLED nwere mkpebi Full HD + nke pikselụ 2.340 x 1.080 na 19.5: nha 9
Igwefoto na-aga n'ihu 40 MP nwere oghere f / 1.6 + 16 MP nwere oghere f / 2.2 + 8 MP nwere oghere f / 3.4
Njikọ Dolby Atmos Bluetooth 5.0 jack 3.5 mm USB-C WiFi 802.11 a / c IP53 GPS GLONASS
Batrị 3.650 mAh na SuperCharge
Akụkụ X x 71.36 149.1 7.57 mm
Ahịa 749 euro
Anyị dị elu karịa elu elu ugwu a, nke na-eme ka o doo anya ọganihu nke ụdị a nweela na afọ ndị a. Ọ bụrụ na afọ gara aga enwere nnukwu mmụba na mma, nke sụgharịrị gaa ire ahịa dị mma. Ihe nke ika a choro imeghari n’aho a na nke ohuru, ya na Huawei P30 a n’elu.
Ezigbo imewe, ụdịdị dị mma, na ọtụtụ ndozi, banyere nke anyị ga-agwa gị karịa n'okpuru, ka i wee mara ihe ọkwa a dị elu ga-ahapụ anyị.
Huawei Nova 4e: Ahịa ọhụrụ ọhụụ ọhụụ ahụ
Huawei P30: Ọganihu dị elu
N'otu aka, anyị nwere ike ịhụ na akara ndị China na-emegharị ahịa na usoro nke imepụta. Ha hapụrụ anyị ọkwa mara ihe karịa, nke na-achịkwa ihuenyo ekwentị obere. Na mgbakwunye na okpokoro pere mpe, nke na-enye ohere ka mma iji n'ihu ngwaọrụ ahụ. N’azụ azụ, nke e ji enyo mee, anyị na-ahụ kamera azụ atọ ndị a.
O doro anya na kamera ndị a bụ isi ihe dị na akara ọhụrụ a. Anyị nwekwara ike ịhụ ya na Huawei P30 a, nke na-ewebata ihe mmetụta dị iche iche atọ. Ihe mmetụta ọ bụla na-arụ ọrụ na nzube, na ọ bụ nchikota a na-enye ndị ọrụ ohere iwepụta foto dị oke mma n'oge niile na njedebe dị elu. Na mgbakwunye, ọgụgụ isi bụ ọrụ maka ịkwalite igwefoto ndị a, yana n'ihu. Na igwefoto dị n'ihu anyị nwekwara mkpọghe ihu nke ngwaọrụ ahụ. Etinyela ihe ntinye aka mkpịsị aka n'okpuru ihuenyo, dịka a tụrụ anya maka ọnwa.
Ngwaọrụ rutere batrị ikike 3.650 mAh, nke nwekwara ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa. Na mkpokọta na Kirin 980 na A gam akporo, anyị nwere ike ịtụ anya nnwere onwe dị ukwuu na ya. Ọ bịakwara na nso nso kachasị ọhụrụ nke akara ndị China, EMUI 9.1 nwa afọ.
Nkọwapụta Huawei P30 Pro
Na ebe nke abụọ anyị na-ahụ ekwentị na-eduga ná njedebe a nke akara ndị China. A mma ama, dị ike na ezi nkọwa. Banyere imewe, Huawei P30 Pro na-ejikwa obere ọmarịcha n'ụdị mmiri mmiri na ihuenyo. Akara ọgụgụ isi nwere uche karị, nke na-enye gị ohere iji ohere nke ngwaọrụ ahụ zuru oke. Na azụ anyị nwere ihe mmetụta anọ, kamera atọ na ihe mmetụta TOF, nchikota karịrị igwefoto ndị ọkachamara.
Maka ndị ọzọ, Huawei P30 Pro ghọrọ kacha mma ekwentị anyị na-ahụ na katalọgụ Nke ika. Ndị a bụ nkọwa zuru ezu nke ngwaọrụ ahụ:
Akụkụ X x 158 73.4 8.41 mm
Ibu ibu 192 grams
Na mgbakwunye na imepụta ọhụrụ ahụ, Huawei P30 Pro na-enyekwa ọhụụ maka agba ọhụrụ. Ọ bụ otu afọ gara aga ka ika webatara grajentị agba, nke anyị hụrụ mgbe e mesịrị na ekwentị ndị ọzọ na katalọgụ ya, na mgbakwunye na ịbụ "mmụọ nsọ" maka ọtụtụ ụdị ndị ọzọ na gam akporo. Na ụdị nke afọ a, anyị nwere agba ọhụụ, nke bụ:
Pearl ọcha (na-eicsomi ụda pel)
Amber Ọwụwa (gradient mmetụta n'etiti oroma na-acha ọbara ọbara-aj u)
Aurora (na-e mimomi agba nke Northern Lights, nwere ndo n'etiti acha anụnụ anụnụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ)
Na-eku ume Cristal (ụda anụnụ anụnụ nke sitere na mmiri Caribbean)
Nhọrọ nke ihe na-adọrọ mmasị, nke a na-akpọ iji merie ndị ọrụ na nhọrọ a. Ọ bụ ezie na imewe abụghị naanị ihe gbanwere na njedebe ọhụrụ a nke ika a. Ebe ọ bụ na anyị na-ahụkwa ọtụtụ ozi na ekwentị, nke mee ya t'ẹphe byakfuta ya nke ika, otu ọnwa mgbe ngosi nke Mate X.
Huawei P30 Pro: Foto dị ka ihe na-elekwasị anya
Obi abụọ adịghị ya, igwefoto bụ nnukwu ngwa agha nke Huawei P30 Pro a. Thedị ndị China na-eji nchikota nke ihe mmetụta anọ dị na ekwentị. Anyị nwere na mbụ ebe ahụ Isi ihe 40 MP nwere oghere f / 1.6 Ọ na-abịa na nzacha ederede RGB. Ejiri ụda odo na-edozi ahịhịa nke ihe nyocha RGB, nke mere na ọ nwere nnukwu mmetụta nke ọkụ, n'ogo nke igwefoto ọkachamara. Ihe mmetụta nke abụọ bụ 20 MP n'obosara-angle 120º na oghere f / 2.2 na nke atọ, nke bụ otu n'ime nnukwu ịtụnanya.
Ebe ọ bụ na Huawei na-ewebata ihe mmetụta 8 MP na oghere f / 3.4, square, ebe ọ bụ na otu anyị nwere 5x periscope mbugharị. Ọ bụ nnukwu mbugharị, na-ekwe ka mbugharị ngwa anya 10x, mbugharị ngwakọ 5x na mbugharị dijitalụ 50x, na-enweghị oke ogo. Otu akụkụ akpọrọ ịgbanwe ahịa. Yana anyị nwere ihe mmetụta TOF, nke ezubere iji ghọta arụmọrụ nke igwefoto, na inwe ike itinye ndozi. Ọ bụ ya mere anyị ji nwee ọgụgụ isi na ya.
Igwefoto nke Huawei P30 Pro a bụ mgbanwe na ahịa. Ha na-ejikwa AIS, nke na-enye ohere nkwụsi ike pụrụ iche nke onyonyo ahụ, yana ọnọdụ abalị nke edobere dị ka nke kachasị mma n'ahịa. A na-ewebata AI HDR + na igwefoto ndị a. Ekele maka teknụzụ a, enwere ike ịghọta ìhè n'oge, na-ekwe ka ọkụ kwụọ ụgwọ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ihe dị mkpa maka ọrụ nke ya na ụdị ọnọdụ niile.
N'ikpeazụ, ma OIS na AIS ka webatara na vidiyo. Ya mere na enwere ike ime ka vidiyo dị ike n'oge niile, ọbụlagodi mgbe ị na-edekọ vidiyo n'abalị. Nke na-enye ohere ịdị elu dị elu n'ụdị ọnọdụ niile. Maka igwefoto dị n'ihu, a na-eji MPNUMX 32 nwere oghere f / 2.0, ebe anyị nwekwara mmeghe ihu.
Nhazi, RAM, nchekwa na batrị
Maka onye nhazi, Kirin 980 bụ onye ahọrọ site na ika dị ka ụbụrụ nke Huawei P30 Pro a. Nhazi ahụ gosipụtara n'afọ gara aga Ọ bụ ike kacha ike anyị nwere na ama ama. Na mgbakwunye, anyị na-ahụ ọnụnọ nke ọgụgụ isi na ya. O nwekwara ihe nhazi ihe maka nke a.
Banyere RAM, anyị na-achọta otu nhọrọ nke 8 GB nke RAM, ọ bụ ezie na anyị nwere ọtụtụ nchekwa. Ndị ọrụ ga-ahọrọ n'etiti 128, 256 na 512 GB nke nchekwa dị n'ime. Ngwakọta niile nwere ohere ịgbasa oghere kwuru, yabụ ikike nchekwa agaghị abụ nsogbu nye onye ọrụ ọ bụla.
Maka batrị ahụ, dịka a nụchara ya, e meela ka ikike ya dịkwuo elu. Nke a Huawei P30 Pro nwere batrị ikike 4.200 mAh. Na mgbakwunye, anyị na-ahụ 40W SuperCharge ngwa ngwa na ya. Ekele maka ụgwọ a, enwere ike ịgba 70% nke batrị na naanị nkeji 30. Anyị nwekwara wireless wireless na ya.
Dị ka sistemụ arụmọrụ ọ na-abịa na android achịcha nwaafọ. Tinyere nsụgharị a, anyị nwere EMUI 9.1 dị ka akwa nhazi. Na mgbakwunye na nhazi ahụ, na ọrụ njikwa batrị nke Android Pie, nnwere onwe agaghị enwe nsogbu na oke dị elu. Akụkụ ọzọ dị mkpa.
Ozugbo amaara ekwentị abụọ ahụ, anyị kwesịrị ịma mgbe a ga-ewepụta ha n'ụlọ ahịa, na mgbakwunye na ọnụahịa ha ga-enwe na nke ọ bụla n'ime nsụgharị ha. Ọ bụ ezie na n'okwu a, anyị na-ahụ otu nsụgharị n'ihe atụ kachasị dị mfe .
N'ihe banyere Huawei P30, anyị nwere otu 6/128 GB Nchikota. Ọnụ ego ekwentị a na ahịa Spanish bụ euro 749, dị ka ọ ga-ekwe omume ịmata ekele maka nzacha gara aga, n'ihi na Carrefour etinyela igwe na ire ere tupu oge eruo. Ejiri ya na agba di iche iche, dika ekwuputara n'oge ahu, dika oji, Aurora ma obu Crystal Breathing. Ndị ahịa ga-enwe ike ịhọrọ agba ha chọrọ. Ise agba na ngụkọta, maka ụdị abụọ ahụ.
N'aka nke ọzọ, Huawei P30 Pro abiara na nchikota di iche iche 8/128 GB, 8/256 na 8/512 GB. Ya mere, ndị na-azụ ahịa ga-enwe ike ịhọrọ dabere na nke ha lere anya kacha daba ha. N'okwu nke gị, ọnụahịa ndị a bụ:
Thedị ya na 8/128 GB ga-akwụ ụgwọ maka euro 949
Huawei P30 Pro na 8/256 GB biara na ọnụahịa nke euro 1049
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei P30 na P30 Pro: A na-emegharị ọhụụ dị elu